February 9, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
မ္းမည့္ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နမိတ္ပါ။ 🙏🙏🙏 လူတိုင္းသိဖို႕ ရွယ္ထားေပးပါ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္ (အျပည့္အစုံဖတ္နိုင္ရန္ ပုံကိုႏွိပ္ပါ)
2020မွာျမန္မာျပည္ႀကီး ေအးခ်မ္းမည့္ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နမိတ္ပါ။ 🙏🙏🙏 လူတိုင္းသိဖို႕ ရွယ္ထားေပးပါ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္ (အျပည့္အစုံဖတ္နိုင္ရန္ ပုံကိုႏွိပ္ပါ) မေန႔ညက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္၊2020မွာျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ ေအးခ်မ္းတဲ့ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နမိတ္ပါဘုရားေလးဆူတို႔၏ ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာရာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလးဆူ ဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရွိ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေစတီမွာ ၃၂၆-ေပ ရွိေသာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ Read more
”သားသမီး (၆) ေယာက္ကို (၁၁) ႏွစ္ တိုင္တိုင္” စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ ျပင္ရင္း ရွာေကၽြးေနတဲ႔ ”အာဂ အေမ”
အမ်ိဳးသား ဆုံးပါသြား ေသာ္လည္ ၁၁ ႏွစ္ တိုင္တိုင္ သားသမီး ၆ ေယာက္ နဲ႔ ဆိုင္ကယ္ စက္ဘီး ျပင္ရင္း ႀကိဳးစား ခဲ့တယ္ ’’ လို႔ ဆိုလာသူ ေဒၚစန္းၾကည္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ … ယခု တခါ တင္ဆက္ ေပးမယ့္ ႐ုပ္သံ ကေတာ့ ဖခင္ မရွိေတာ့တဲ့ သားသမီး ၆ ေယာက္ အတြက္ ၁၁ ႏွစ္ တိုင္ေအာင္ စက္ဘီး ဆိုင္ကယ္ Read more
အမေ့ဆီ မပို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံဖောက်ဝင်သွားတဲ့ လစာငွေလေ
Unicode မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး သို့…..အမေ အမေတို့ မိသားစုတွေ နေကောင်းကြလား၊ သားလဲကျန်းမာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းဆောင်နေပါတယ် အမေ….ညီလေးနဲ့ညီမလေး စာတွေကောလိုက်နိုင်ရဲ့လားအမေ….ကျနော်က သားကြီးသြရသ ဖြစ်ပီး အမေတို့နဲ့ ခွဲခွာသွားရတာကို အပစ်မတင်ပါနဲ့နော် အမေ….. သား အမေဆီ လစာမှန်မှန်ပို့ပေးတယ်နော်အမေ….ဒီတခေါက် ရှေ့တန်းပြန်ဝင်ရင် သားအမေတို့ဆီဆက်ဆက်ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်အမေ…..အမေ …ဒီလတော့ သားလစာပို့တါနောက်ကျမယ် နော် အမေ……သားလစာက ရှေ့တန်းထိပါလာလို့လေ…..နောက်တန်းပြန်မဲ့ အကြုံနဲ့သားထည့်ပေးလိုက်ပါ့မယ်အမေ …..အမေမျှော်နေမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်…… အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း အမေက သားကိုပဲ အားကိုးနေရတာလေ…..အမေ လစာနောက်ကျလို့စိတ်မပူပါနဲ့နော်အမေ……သား အမြန်ဆုံး အကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် အမေ….သားစာဖတ်ပီး Read more
ဖုန္းကိုင္ခြင့္မ႐ွိ အျပင္ထြက္ခြင့္ မ႐ွိေသာ ျမန္မာႏို္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး သီလ႐ွင္စာသင္တိုက္
ဖုန္းကိုင္ခြင့္မ႐ွိ အျပင္ထြက္ခြင့္ မ႐ွိေသာ ျမန္မာႏို္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး သီလ႐ွင္စာသင္တိုက္ဖုန္းကိုင္ခြင့္မ႐ွိ အျပင္ထြက္ခြင့္ မ႐ွိတဲ့ ျမန္မာႏို္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး သီလ႐ွင္ စာသင္တိုက္ စစ္ကိုင္း သက် ဓီတာ (ဗုဒၶသမီးေတာ္မ်ား) စာသင္တိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းအရမ္းႀကီးတယ္လို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ စာသင္သူ သီလ႐ွင္ သိကၡာ႐ွင္) ေပါင္း အပါး ( ၂၅၀) ေက်ာ္႐ွိတယ္။ ဖုန္းကိုင္ခြင့္မ႐ွိဘူး။ အျပင္ထြက္ခြင့္ မ႐ွိဘူး…။ တိုက္ထဲမွာ ဓမၼာစရိယ ဘြဲ႔ရေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဝိနယဝိဒူ ေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ပါဠိပါရဂူနဲ႔ လကၤာရေတြလည္း Read more
သူမရဲ့ အိမ်ထောက်ဖက် အသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေဆီ ချပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေကဗျာ 😮 လိုက်ဖက်တယ် 😍
ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့မေကဗျာလေးဟာ အခုဆိုရင် Right Person ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကြောင့် အရမ်းကိုပျော်ရွှင်နေရပါပြီ။ သမီးဖြစ်သူကြောင့် နောက်အိမ်ထောင်မပြုတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် သူမတို့သားမိနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဘဝအတွက် အခိုင်အမာရပ်တည်ပေးမယ့် အမျိုးကောင်းသားကြောင့် အခုတော့ ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထောင်ရေးလေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ချစ်စရာသမီးလေးဟာ အသက်အရွယ်လည်းရလာပြီး ပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်သူလေးပါ။ မေကဗျာရဲ့အနုပညာသက်တမ်းဟာလည်း ဆယ်စုနှစ်တွေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်ဆဲပါပဲ။ ယခင်အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ ကွဲကွာခဲ့ရပေမယ့် အခုလက်ရှိအမျိုးသားကတော့ သူမကိုသိပ်ချစ်ပုံရပါတယ်။ ပျော်စရာမိသားစုဘဝလေးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Congratulation ပါနော်။ အချိန်တွေကြာလာပေမယ့်လည်း ပိုပိုပြီးလှလာတာ ဂရုစိုက်ပြီးချစ်တဲ့ခင်ပွန်းကြောင့်ပေါ့နော်။ သုံးယောက်ဘဝလေးမှာ အေးချမ်းသာယာမှုတွေနဲ့ Read more
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်လို့ မြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားလာဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံလေးများ
Unicode ယနေ့ခေတ်ဟာ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့ အညီ ဆိုးကျိုးတွေလည်း များလာပါတယ်… အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ စီးဆင်းလာခဲ့ပြီး မြန်မာဆန်မှုတချို့ဟာ ပျောက်ကုန်ပါတယ်…ဥပမာ ဆံပင်ရှည်တွေနေရာမှာ အတိုတွေ ဝင်လာတယ်…သနပ်ခါးနေရာမှာ မိတ်ကပ်တွေ ဝင်လာတယ်… ထမီရင်ဖုံးနေရာမှာ ရင်ဟိုက် အတိုအကြပ်လေးတွေ ဝင်လာပါတယ်….ဒါတွေကိုတော့ ထိန်းသိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါမှသာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ မပျောက်ပျက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်… အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…တိုးတက်လာတာလည်းတိုးတက်လာတာပေါ့….ထိန်းသိမ်းရမှာလည်း ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့နော်…..ခုပြောပြမဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် နိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး နှစ်သက်လွန်းတာကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ဆင်ယင်ထားခဲ့ပါတယ်… အဲတာကတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားလာဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးဟာ Read more
မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ မြေပုံအနားသွားပြီး “မေမေရေ..မေမေရေ” လို့အော်ခေါ်နေတဲ့ သနားစရာကောင်းတဲ့သားငယ်လေး
Unicode မိဘနှစ်ပါးလုံးကို မြုပ်နှံထားတဲ့ သင်္ချိုင်းမြေပုံအနားသွားပြီး “မေမေရေ..မေမေရေ” ဆိုပြီး အော်ခေါ်နေခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့သားလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလေးတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းကတော့ တစ်ချိန်ချိန်တစ်နေ့နေ့မှာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ ကြုံဆုံ ၊ ကွဲကွာ ၊ ထားရစ်ခဲ့ရမှာပါပဲလေ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း 2နှစ်သားအရွယ် မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးကို တစ်ကြိမ်ထဲမှာပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ မိခင်ကို အတော်လေးလွမ်းဆွတ်နေခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ သဲမြေပုံလေးအကြား သဲမြေတွေနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တာကို မခံစားနိုင်လို့ ကလေးငယ်ရဲ့အဖြစ်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူက Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝေမျှသွားပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဒေါ်ဖြစ်သူ ရေးသားထားခဲ့တာကတော့.. Read more
သာသနာတော်အတွက် ကိုရင်လေးကို ကူညီပေးကြစေလိုပါတယ်
Unicode ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းကလည်း ကုသိုလ်တွေပါပဲ…. မလှူ နိုင်ရင်တောင်မှ ကိုရင်လေးအတွက် သာသနာတော်အတွက် ရှယ်ပေးကြပါ လှူတဲ့လူပေါ်လာတော့ ကိုရင်လေတွက် အားဖစ်တာပေါ့ ။ စာတော်တဲ့ ကိုရင်လေးပါ။ တတ်နိူင်ရင် လှူဒါန်းပေးကြပါ။ နှလုံးအဆို့ရှင်မှာ သွေးခဲနေလို့ သေမလိုဖြစ်နေတဲ့ ကိုရင်လေးပါ။ ကိုရင်လေးရဲ့ မိဘများ၏ ပုံရိပ်တွေကလည်း အရမ်းအားငယ်ပြီး ရင်ဆို့ကာ စိတ်မကောင်း အတော်ဖြစ်နေဟန်ပါ။ ကိုရင်ဘွဲ့တော်က ရှင်ဥတ္တမ သက်တော်က ၁၄နှစ် ဝါတော်က ၅.ဝါရှိပါပြီ။ ခင်ဦးမြို့နယ် ယောက်သွားအိုင်ကနေ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံကျာင်းမှာ စာဝါလိုက်နေတာပါ။ ဤကျောင်းတိုက်ဟာ ပရိယတ္တိသာသနာတော်မြတ်ကြီး Read more
နားကြပ်တံနဲ့ နားကြပ်ရာမှာ ဘဝပျက်မတတ်ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်
Unicode နားကို လူတွေက မကြာခဏသန့်ရှင်းလေးလုပ်တတ်ကြပါတယ်…. နားဖာကလော်တံနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဂွမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ နားကြပ်တံနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ကြတာပါဒီလို နားကို ဝါဂွမ်းပါတဲ့ နားကြပ်တံလေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ရာမှာ ဂရုတစိုက်ရှိဖို့ ခုဖော်ပြမဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးက သက်သေပြသွားပါတယ်…. လူတစ်ဦးဟာ နားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း နားကြပ်တံ နားထဲမှာ ကျိုးကျန်ရစ်ပြီး နားပင်းသွားတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ……လူတစ်ဦးဟာ ဝါဂွမ်းပါတဲ့ နားကြပ်တံနဲ့ နားကြပ်ရာမှာ နားကြပ်တံကျိုးပြီး နားထဲကျန်ခဲ့ပါတယ်… ကျိုးသွားတဲ့ နားကြပ်တံဟာ နားစည်ကို ထောက်ထားတာကြောင့် အဆိုပါအမျိုးသားဟာ နားကန်းလုမတတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…နားထဲကနေ ဆရာဝန်တွေက နားကြပ်တံကို ကြိုးစားပမ်းစား Read more